Etu aga - esi ebugharị Blog gị ma jigide oge ọchụchọ | Martech Zone
Wenezdee, Jenụwarị 6, 2010 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị nwere blog dị, ohere bụ na ị nwere ikike injinị ihe nchọgharị wuru ngalaba ahụ ma ọ bụ subdomain. Dịka, ụlọ ọrụ na-amalite blọọgụ ọhụụ ma hapụ nke ochie ha. Ọ bụrụ na ọdịnaya ochie gị efuola, nke a nwere ike ịbụ nnukwu mbibi ngwa ngwa.
Iji debe ikike njikwa injinị, nke a bụ otu esi akwaga na ikpo okwu ntanetị ọhụrụ:
Bupu ọdịnaya blọgụ ochie gị ma bubata ha na ntanetị ịde blọgụ ọhụrụ gị. Ọbụlagodi na ị jiri aka gị mee nke a, nke ahụ ka mma karịa ịmalite na enweghị afọ ojuju.
Dee ederede 301 site na blọọgụ blọọgụ ochie na URL ọhụrụ post post URL. Platformsfọdụ nyiwe nwere redirection modul ma ọ bụ plugins ime ka nka di nfe.
Dee ntụgharị site na blọọgụ RSS ochie na blọọgụ RSS ọhụrụ. Aga m akwado iji ya Feedpress nke mere na ị nwere ike imelite ndepụta ahụ na enweghị nkwụsị na ọdịnihu (Ọ bụ ezie na ọ dị m ka ya bụrụ na mmadụ ga-apụta n'ụzọ ọzọ na Feedburner! Ọ jọgburu onwe ya).
Ọ bụrụ na ị na-agagharị ngalaba ma ọ bụ subdomains, ọ ga-ekwe omume ibugharị gaa na adreesị blog ọhụrụ. Kwadoro: Achọpụtala m na ndị ahịa na-efunahụ ụfọdụ ogo ha mgbe ha na-eme subdomains mana ha na-enwe ike ilaghachi azụ ngwa ngwa. Gbanwe ngalaba kpamkpam nwere ike inwe oke mmetụta. M ga-anwa zere nke a n'agbanyeghị ụgwọ.
Nwalee ọtụtụ URL ochie gị ma hụ na ha gafere nke ọma.
Nyochaa Njikwa Nchọta Google na Webmaster nke Bing maka ibe ndị a na-ahụghị wee mezie ha. Echegbula ịlele ụbọchị ọ bụla - ọ ga-ewe otu izu ma ọ bụ abụọ tupu ị hụ nyocha
Republish gị Sitemap na resubmit oge ọ bụla ị mezie ihe.
Ọ bụrụ na ị na-agbanwe ngalaba gị ma ọ bụ subdomain gị, nnukwu nsogbu ị ga-ewere bụ na saịtị dị ka Technorati, nke chọrọ ka ị debanye aha adreesị ọhụrụ gị. Ha enweghi uzo iji melite adreesị gị.
Nke a bụ nseta ihuenyo nke Google Search Console na otu ị nwere ike isi chọọ 404 Not Found references:
Site n'ịhụ na ebutegharịrị ọdịnaya gị, ọ bụghị naanị na ị ga - ahụ na ndị ọbịa ka nwere ike ime ya na ọdịnaya ha na - achọ, ị ga - ewepụta peeji 404 Not Found peeji nke pere mpe. Otu ihe edetu na nke a… nye Webmasters otu izu ma ọ bụ abụọ iji jide ha! Mgbe i ghazighara adreesị ọjọọ ndị ahụ, ọ gaghị edozi ya ozugbo na Webmasters (Amaghị m ihe kpatara ya!).
Na ederede ahụ, m na-ahụkarị na saịtị ndị dị na mpụga na-ebipụta URL na-ezighi ezi - yabụ m ga-atụgharị URL ọjọọ ndị ahụ nke ọma!
Tags: 404onye njikwa websaịtịgoogle webmasterdata ogodata ogo datawebmasterwebmasters
Ekwenyere m na WordPress mgbakwunye Redirection bụ nchekwa ndụ, m hụrụ ya n'anya n'ezie. A sị na m matara mgbe ahụ ihe m maara ugbu a, ọ gaara azọpụta m ọtụtụ isi ọwụwa. Daalụ Douglas!